Posted Date : 11/3/2020 11:04:32 PM
မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ စာကြည့်တိုက်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက်ရေကြောင်း ဘက်ဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု စာအုပ် (၂၆၆) အုပ်အား စင်္ကာပူနိုင်ငံနေ Ex.GM, APEX SHIP MANAGEMENT PTE .LTD ဖြစ်သူ Capt.လှအောင် (CDC 5216) နှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်သန်းနွယ်တို့မှ လှူဒါန်းသည့်အခမ်းအနားအား (၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ပါမောက္ခချုပ်ရုံးအစည်းအဝေးအခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမြတ်လွင် ၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား) ၊ ဌာနမှူး(စီမံ) ၊ စာကြည့်တိုက်မှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ၊ အလှူရှင်များ ကိုယ်စား Capt . ဉီးဘဉာဏ် ( Kyawt Cham Khant Co.,Ltd ) နှင့် Capt.ဉီးဝင်းငွေ( Ocean Win Co.,Ltd) တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပါမောက္ခချုပ်မှ လှူဒါန်းသည့် ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ် (၂၆၆) အုပ်အား လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကာ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း လွှာအား ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် Capt . ဉီးဘဉာဏ် (Kyawt Cham Khant Co.,Ltd) နှင့် Capt.ဉီးဝင်းငွေ ( Ocean Win Co.,Ltd)တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် စာကြည့် တိုက်သို့ အလှူငွေ (၃) သိန်းကျပ်အား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။